CCW oo kalamo looga hadlayo abaaraha ka wada Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
CCW oo kalamo looga hadlayo abaaraha ka wada Muqdisho
Madaxda Hay’adaha Qaramada Midoobay, Baanka adduunka iyo danjire FEI ayaa ballan qaaday in ay dadaalkooda laban-laabayaan, degdegna ugu istaagayaan wax ka qabashada xaaladaha abaaraha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ergeyga gaarka ah ee Arrimaha Bani’aadannimada iyo Gurmadka Abaaraha, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa wali wada kulamo uu la yeelanayo, danjirayaasha beesha caalamka ee ku sugan Muqdisho iyo hay’adaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bani’adannimada.
Isniintii, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, wuxuu la kulmay, madaxda ugu saraysa ha’yadaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ka hawl-gala oo ay ka mid yihiin; WFP, UNICEF, UNHCR, IOM, OCHA iyo kuwa kale, kuwaasoo uu kala hadlay sidii degdeg loogu gurman lahaa dadka abaaruhu waxyeelleeyeen.
Ergaygu wuxuu kaloo kulan la yeeshay Madaxa Baanka Adduunka ee Soomaaliya oo ay ka wada hadleen sidii uu Bankiga u gacan sii lahaa xalka waara ee dadka abaaruhu waxyeelleeyeen, loona dardar gelin laahaa taageerada Bangiga ee mashruucyada degdega ah, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ergayga.
Isla shalay wuxuu kulan la qaatay, Safiirka dowladda Shiinaha ee Soomaliya, Ambassador FEI Shengchao, kaasoo uu kala hadlay sidii loogu diyaar diyaar garoobi lahaa xaaladda bani’aadannimo ee dalka ku soo wajahan, loona dardar gali lahaa raadinta taageero loo fidiyo dadka abaaruhu waxyeelleeyeen.
Madaxda Hay’adaha Qaramada Midoobay, Baanka adduunka iyo danjire FEI ayaa ballan qaaday in ay dadaalkooda laban-laabayaan, degdegna ugu istaagayaan wax ka qabashada xaaladaha abaaraha, si loo samatabixiyo, dadka gargaarka u baahan ee abaaruhu saameynta taban ku yeesheen.
Ergeyga waxaa masuuliyadihiisa ka mid ah, dardar gelinta iyo raadinta taageero loo fidiyo dadka abaaruhu halakeeyeen iyo dajinta qorshe rasmi ah oo xal-waara u noqda abaaraha soo laalaabta, wuxuuna dhawaan socdaal ku tagay magaalada Baydhabo, si uu ugu kuurgalo nolosha barakacayaal ku sugan Xarunta gobolka Bay.
Xilli-roobaadkii afaraad oo xiriir ah oo aan sidii la rabay u di’in, sicirikii oo circa isku shareeray iyo gurmadka bini'aadannimo oo aan helin dhaqaale ku filan ayaa sababay sugnaan la’aan cunto, gaajo iyo cudurro ka jira gudaha Soomaaliya. Iyadoo aan la ogeyn halka ay ku dhammaan doonto abaarta ba'an ee dalka ku habsatay.
In ka badan 7.1 milyan oo Soomaali ah (in ku dhow 50 boqolkiiba dadweynaha) ay hadda wajahayaan sugnaan la’aan cunto. 213,000 oo qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa wajahaya gaajo musiibo ah iyo macaluul, taasoo 81,000 ka badan saadaasha bishii Abriil.